Yugaandaan fayyadamtoota WhatsApp ashuraa kanfalchiisuuf - BBC News Afaan Oromoo
Yugaandaan fayyadamtoota WhatsApp ashuraa kanfalchiisuuf
Pirezidaantiin Yugaandaa Yowerii Musevoniin galiin ashuraa kana irraa argamuus biyyattii ni gargaara jechuun dubbataniiru.
Paarlaamaan Yugaandaa erga danbiiwwan gagabaaboo ragaasiseen booda, WhatsApp mala midiyaa hawaasaa keessaa tokko ta'eetti kanneen fayyadman ammoo guyyaatti shilingii biyyattii 200 ashuuraa akka kanfalaniif murteesseera.
Kanaanis fayyadamtoonni tokkoon tokkoosaanii guyyaatti dolaara 0.05 ta'u kan walitti qabamu yoo ta'u, seerri haaraan kunis hojiirra kan oluu baatii Adoolessa irraa kan eegalu ta'uun barameera.
Kana malees, biyyattiin maallaqa kara mobaayilaatiin dabarfamu irrattis ashuuraa keessaa jirti. Haaluma kanaanis maallaqa eergamu 100 keessaa harki tokko ashuraan akka kanfalamu murteessite jirti.
Gaazexaan dhuunfaa 'Daily Monitor' akka gabaaseetti, murteee kinis kan baayateedha jechuun yoo xinnaate miseensoonni paarlaamaa harki sadii qeeqanii ture.
Akkuma miseensoonni paarlaamaa kunneen jedhanittis, lamileen WhatsApp kan fayyadaman kaardii dursanii bataniitti waan ta'eef, akka deebiin akka ashuraa kanfalan taasifamuun mirga kan dhiibuudha jedhaniiru.
Miseensi paartii aangoorra jiru kan biraa ammoo ''ashuraan dhibbatti tokko kanfalu miseensoota paarlaamaatiif xiqqaadha. Garuu namoota guyyaatti dolaara tokkoo gadii argataniif baayyee cimaadha,'' jechuun mormaniiru.
'Ajjeechaa Waldiyaan namoonni shakkaman 13 to'ataman'
Qormaati Keemistirii barattootaafi barsiisota Keenyaa dhukkubaaf saaxile
Gaambiyaan duguuggaa sanyiin Mayanmaar himatte
Itiyoo telekoom Obbo Gammachis du'a oolchuu danda'a turee?
Lakkoofsi uummataa maaliif dhimma falmisiisaa ta'e?